Ergeyga Q.M u qaabilsan Soomaaliya oo Djabuti kala hadlay arrimaha Soomaaliya. – SBC
Ergeyga Q.M u qaabilsan Soomaaliya oo Djabuti kala hadlay arrimaha Soomaaliya.
Ergeyga gaarka ah ee Q.M u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Augustine Mahiga oo gaaray dalka Djabuti ayaa kala hadlay xukuumadda Djibuti xal u helidda dalka Soomaaliya.
Mahiga oo la kulmay waziirka Arrimaha dibadda ee Djabuti Maxamed Cali Yuusuf iyo Mas’uuliyiin kale ayaa kala hadlay sidii loo xalin lahaa khilaafaadka ka dhex oogan madaxda ugu sareysa dowladda KMG ee Soomaaliya.
Mahiga xilli uu la hadlayay Waziirka arrimaha dibadda Djabuti ayuu u sheegay in ay laga maarmaan tahay in laga wada shaqeeyo sidii nabad looga dhalin laha guud ahaan dalka Soomaaliya islamarkaana la qaado tallaabo lagu xalinayo is fahan la’aanta u dhaxeysa Madaxda ugu sareysa dowladda KMG ee Soomaaliya. Dhanka kale waziirka arrimaha dibadda Djabuti Maxamed Cali Yuusuf ayaa carabaabay in loo bahanyahay in la dhowro waqti kororsiga xukuumadda KMG ee Soomaaliya maadaama ay wado dadaalo ay ku raadineyso nabadda.
wuxuu intaasi ku daray in dowladda Djabuti ay ka go’antahay dadaal kasta oo xal looga raadinayo horumarka iyo nabadda Soomaaliya.
Labada Mas’uul ee ugu sareysa xukuumadda Soomaaliya Madaxweyne Sh./ Shariif Sh. Axmed iyo Guddoomiyaha Barlamanka Shariif Xasan Sh. Aadan ayaa isku fahmi la’ waxyaabo badan oo ku saabsan dowladda, kulankii ka dhacay Nairbo ee looga hadlayay arrimaha Soomaaliya oo ay diideen in ay ka qeyb galaan Ra’izul wazaaraha iyo Madaxweynaha oo uu ka qeyb galay Shariif Xasan ayaa kamid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee soo ifbixiyay khilaafka u dhexeya madaxda dowladda.?
Mahiga xilli uu la hadlayay Waziirka arrimaha dibadda Djabuti ayuu u sheegay in ay laga maarmaan tahay in laga wada shaqeeyo sidii nabad looga dhalin laha guud ahaan dalka Soomaaliya islamarkaana la qaado tallaabo lagu xalinayo is fahan la’aanta u dhaxeysa Madaxda ugu sareysa dowladda KMG ee Soomaaliya.
Dhanka kale waziirka arrimaha dibadda Djabuti Maxamed Cali Yuusuf ayaa carabaabay in loo bahanyahay in la dhowro waqti kororsiga xukuumadda KMG ee Soomaaliya maadaama ay wado dadaalo ay ku raadineyso nabadda. wuxuu intaasi ku daray in dowladda Djabuti ay ka go’antahay dadaal kasta oo xal looga raadinayo horumarka iyo nabadda Soomaaliya.
Labada Mas’uul ee ugu sareysa xukuumadda Soomaaliya Madaxweyne Sh./ Shariif Sh. Axmed iyo Guddoomiyaha Barlamanka Shariif Xasan Sh. Aadan ayaa isku fahmi la’ waxyaabo badan oo ku saabsan dowladda, kulankii ka dhacay Nairbo ee looga hadlayay arrimaha Soomaaliya oo ay diideen in ay ka qeyb galaan Ra’izul wazaaraha iyo Madaxweynaha oo uu ka qeyb galay Shariif Xasan ayaa kamid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee soo ifbixiyay khilaafka u dhexeya madaxda dowladda.